Ahlusuna Oo Dagaal kula wareegtay Deegaano ka mid ah Gobolka Hiiraan – SBC
Ahlusuna Oo Dagaal kula wareegtay Deegaano ka mid ah Gobolka Hiiraan
Deegaanka Goobo oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan 4Km ayaa waxaa la wareegay Ciidamada Culimaaudiinka Ahlusuna walkameeca ka dib dagaal dhexmaray xarakada Alshabaab oo iyagu markii hore halkaasi ku sugnaa .
Dagaalka ayaa dhacay ka dib markii ay Ahlusuna deegaankaasi ku soo qaadeen guluf dagaal iyagoona dagaal ka dib ay u suurto gashay in ay la wareegaan deegaanka Goobo iyo deegaano yar yar oo hoosyimaada Maxaas sida ay xaqiijiyeen dadka deegaankaasi ku dhaqan .
waxaa dagaalkaasi ku dhintay tiro dad ah oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayid ah waxaana ay goobjoogayaasha qaarkood sheegeen in dadka dhintay ay ku dhow dhow yihiin 5 Qof uuna jiro dhaawac kale oo intaasi ka badan .
Dagaalada ka soo cusboonaaday dhanka deegaanka Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa ah kuwo salka ku haya qilaafaadka iyo dagaalada Dalka qeybahiisa badan ku dhexmaraya xarakada Alshabaab iyo DKMG ah siiba kan ka socda dhanka waqooyiga ee gobolka Hiiraan.
Sidoo kale dagaaladan ayaa yimid ka dib markii mudooyinkii ugu dambeeyay deegaanada lagu dagaalamay xalay ilaa saaka ee Maxaas ay dhaq dhaqaaqyo ka wadeen xarakada Alshabaab iyo Culimada Ahlusuna waljameeca, mana ahan markii ugu horeysay oo ay deegaankaasi ku dagaalamaan labadan dhinac .
Sikastaba ha ahaatee dadka deegaanka ayaa arimaha xisadaha dagaal ka muujiyay walaac daran iyagoona ka cabsi qaba in ay badaan dhibaatooyin iyo qax hor leh.